Yan Aung: ရှေ့သို့ချီ...
ကွန့်မန့်လာရေးပေးသွားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ လက်ခတ်သံ စာသားက မှတ်မိသလို ရေးလိုက်မိတာပါ။ သီချင်းက မရှိဘူးရှင့်။ လိုက်ရှာတာ မတွေ့ဘူး။ emailက myaywetwai@gmail.comပါ။ English4Successက ဖတ်ဖြစ်တယ်။ ပါဝင်ဆွေးနွေးဖို့က အဲလောက်မတတ်လို့ပါ။ ကျွန်မက တပည့်လုပ်မှာလေ။:D
ကိုရန်ရေ မှားသွားလို့ လူများအီးမေးနဲ့ဝင်နေတယ်
မှန်လိုက်လေ အစ်ကိုရယ်။ စုစည်းပြီးအရှေ့ကို ဆက်ကြတာပေါ့။ မကြာခင်မှာပန်းတိုင်ဆီကိုရောက်မှာပါ။
သိုးလေးတော့ English ဘလော့လေးမှာပဲ လေ့ကျင့်သူ လုပ်နေတယ်။ ကိုရန်ပြောသလိုပဲ ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးတာ ပိုကောင်းတယ်။ မှန်တယ်။ သိုးလေးတို့ကျတော့ အချိန်နဲ့လုပြီး ကူး၊ အိမ်ရောက်မှ ဖတ်၊ နောက်နေ့ကျတော့ ချက်ချင်း မလာနိုင်၊ တစ်ရက်ခြား နှစ်ရက်ခြား ဖြစ်သွားပြန်၊ ပို့စ်တွေက အသစ်ထပ်တင်၊ အမီလိုက်ဖတ် အဲလိုနဲ့ လည်နေတာ။ နောက်ပိုင်းတော့ သေချာဇောက်ချလုပ်ပြီဆိုရင် မမေးလို့ကို မရတော့ဘူး၊ မေးရတော့မှာ။ IELTS ဖြေဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့သူတွေကို ရည်ရွယ်ပြီး နမူနာပုံစံလေးတွေ (စာမေးပွဲမှာ မေးတတ်တဲ့) တင်ပေးရင် အရမ်းကောင်းမယ်နော်။ listening အတွက် mp3 တွေ တင်ပေးမယ်ဆိုတာ မျှော်နေတယ်။
I really appreciate all of your efforts. Concerning with less feedbacks in English for success, I just would like to sympathize as one of the audiences. I think, feedbacks come from either passions or complaints. We are very sure that there is no complaints. So how about passions? Human beings are learning along their life. Life long learning. But sometime, people are exhausted with that. Just an instant, even after graduating, if someone think for promotion or migration he/she has to have the English scores again because of we are Myanmar. In this case, the passion with him/her is very very weak. So even learning and have to learn, no active at all. I Just imagine the reasons why and it may be one factor.